बुधबार, १ फागुन, २०७५
यो युरोपको सबैभन्दा सानो देश मध्य पर्छ । यो ४६८ स्क्वायर किलोमिटरमा फैलिएको छ ।
यो युरोपको छैटौ सानो देश हो ८३ हजार जनसंख्या रहेको यो देशको राजधानी एण्डोरा लाभेला हो ।
सानो भएपनि धेरै विकसित छ यो देश । यहाँका मानिसहरुको औसत उमेर ८२ वर्ष रहेको छ ।
यो देशको अजब लाग्दो एउटा कानुन छ । यहाँ हरेक एउटा परिवारलाई बन्दुक राख्न भनिएको छ ।
इमरजेन्सीका बेला आफु सुरक्षित हुन् भन्ने आशयले यस्तो नियम बनाइएको हो ।
९. इक्युटोरियल गिनी
यो देश पश्चिमी मध्य अफ्रिकामा रहेको छ । यो अफ्रिका भरमा स्पेनिस बोल्ने एकमात्र देश हो । यो देशको राजधानी मलाओ हो । यहाँको जनसंख्या १२ लाख रहेको छ ।
८. द रिपब्लिक अफ भनाउटु
यो देश अष्ट्रेलियादेखि ३६१७ किलोमिटर पर रहेको छ । यसको राजधानी पोइन्ट भिल्ला हो । यो देश ८० द्धिपमा अवस्थित रहेको छ ।
यो देशको क्षेत्रफल १२१९९ स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ भने जनसंख्या ३ लाख ४६ हजार ४८९ रहेको छ ।
यो देश युक्रेन र रोमानियाको बीचमा रहेको छ । यो स्वयम घोषित देश हो । यस देशलाई ती देशलेमात्र देश मानेका छन् । यो देश युनाइटेड नेशनको सदस्य छैन । त्यस्तै यो देशलाई देश मान्ने ती तीन देश पनि युनाइटेड नेशनका सदस्य छैनन् ।
सन् १९५२ मा यो देशले स्वतन्त्रताको लडाइ लडेको थियो ।
यो देशको आफ्नै मुद्रा, आर्मी, राष्ट्रपति रहेका छन् ।
यो देशको क्षेत्रफल ४०१६ स्क्वायर किलोटिमर रहेको छ र जनसंख्या ५ लाखभन्दा बढी रहेको छ ।
६. साउथ ओसिटिया
यो आम्शिक रुपले मानिएको देश हो । यो देश जर्जिया र रसियाको बीचमा रहेको छ ।
यो देशलाई विवादित क्षेत्रका रुपमा हेरिन्छ । रसिया र जर्जियाबीच भएको युद्धका कारण वाक्क भएका यस क्षेत्रका जनताले छुट्टै देश भएको घोषणा गरेका थिए ।
यो देशको जनसंख्या ७० हजार रहेको छ ।
यो देशमा रसियाको बाटोमात्रै भएर जान मिल्छ ।
५. ब्रुकिना फाँसो
यो देश सहरा मरभुमिको दक्षिण भागमा रहेको छ । यहाँको जनसख्या १ करोड ७३ लाख रहेको छ । यसको राजधानी ओगादोगु हो । यो देश अफ्रिकन आर्ट र संस्कृतिमा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ ।
यो देशको आधिकारीक भाषा फ्रेन्च हो ।
अफ्रिकन महादेश नजिक रहेको एउटा आयरल्याण्डमा यो देश अवस्थित रहेको छ । यसको राजधानी मोरुही हो । घुम्नका लागि यो देशमा वार्षिक लाखौ पर्यटकहरु आउने गर्छन् ।
यो देशमा अरबी र फ्रेन्च संस्कृतिको प्रभाव उच्च रहेको छ । यो देशको क्षेत्रफल २०३४ स्क्वायर किलोमिटर रहेको भने जनसंख्या ८ लाखभन्दा बढी रहेको छ ।
यो देश मध्यपुर्वी अफ्रिकामा अवस्थित छ । यसको क्षेत्रफल २३२०० स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ भने जनसंख्या ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी रहेको छ ।
यसको राजधानी जिबुटी सिटी हो ।
यो एक आयरल्याण्ड देश हो ।
यो देश अष्ट्रेलियादेखि ५१५३ किलोमिटर पर रहेको छ । यसको राजधानी फुनाफुटी हो । यो देशको क्षेत्रफल २६ स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ । यो विश्वकै सबैभन्दा सानो चौथो देश हो ।
यो देशको जनसंख्या १०,६४० रहेको छ ।
यो देशमा आर्मी छैनन् ।
यो देशका राष्ट्राध्यक्ष बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ हुन् ।
१. द रिपब्लिकन अफ किरीबाटी
सेन्ट्रल प्यासिफिक ओसन यो देश ३३ वटा आयरल्याण्डमा फैलिएको छ । यो देशको क्षेत्रफल ८०६ स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ । यसको राजधानी साउथ त्रेवा हो । त्यस्तै यहाँको जनसंख्या लगभग १ लाख रहेको छ । यस देशका मानिसहरु एकदमै मित्रवत व्यवहार गर्छन् । आफ्नो देशमा आउने पर्यटकहरुलाई उनीहरु भव्य स्वागत गर्छन् ।